Kooxaha yurub ayaa isku dayi doona inay ka faa’iideystaan ​​suuqa kala iibsiga jiilaalka iyagoo og inaysan u weyneyn sida suuqa xagaaga oo ay adag tahay in saxiixyo waa weyn la sameeyo bartamaha xilli ciyaareedka.
Laakiin sidaan halkan ku baranay, waxaan idinla wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa iyo xanta suuqa dhexdiisa wargeysyada ugu waa weyn yurub maalintii khamiista.
Musharaxa madaxweynaha Barcelona Agusti Benedito ayaa sheegay inuusan fileynin in Lionel Messi (33 jir) uu cusbooneysiin doono qandaraaskiisa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan. (Hadaf)
Manchester City ayaa rumeysan inay noqon doonaan kooxdii ugu horreysay ee la soo saxiixata Lionel Messi haddii uu go’aansado inuu ka tago Barcelona xagaagan. (Telegraph)
Aston Villa ayaa qorsheyneysa inay dalab ka gudbiso Jack Grealish miiska u saaran yahay suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, in kastoo kooxaha waa weyn ee Premier League ay dib u soo cusbooneysiiyeen xiisihii ay u qabeen 25-jirka reer England. (Boostada)
Everton ayaa rajeyneysa inay dalab rasmi ah ka hesho PSG si ay u hesho Moise Keane, oo 20 jir ah, kaasoo amaah ugu jooga kooxda reer France, laakiin Toffees ayaa ka caga jiideysa inay go’aan deg deg ah ka gaarto da’yarka. (Liverpool Echo)
Ciyaaryahanka Arsenal Mesut Ozil oo 32 jir ah ayaa ogolaaday heshiis seddex sano iyo bar ah oo uu kula joogo kooxda reer Turkey ee Fenerbahce. (DHA)
Sida laga soo xigtay wakiilkiisa, mustaqbalka Mesut Ozil ayaa dhawaan la go’aamin doonaa, laakiin ku guuleystaha Jarmalka ee Koobka Adduunka wuxuu damacsan yahay inuu dhameystiro qandaraaska uu kula joogo Arsenal ilaa xagaaga soo aadan. (ESPN)
Daafaca Manchester United Marcus Rojo, oo 30 jir ah, ayaa u saxiixay Boca Juniors heshiis labo sano ah bisha Janaayo, laakiin Boca ayaa ka caga jiideysa inay ku siiso qaab bilaash ah. (ESPN)
Wadahadalada udhaxeeya Liverpool iyo ciyaaryahanka khadka dhexe Georginio Wijanldum, oo 30 jir ah, ayaa gaaray meel sare. (Sky Sports)
Tottenham ayaa ku qanacsan in weeraryahanka reer Kuuriyada Koonfureed Son Heung-min, oo 28 jir ah, uu saxiixi doono qandaraas cusub oo uu ku sii joogayo kooxda ilaa 2023. (Telegraph)
Daafaca Chelsea Fikayo Tomori ayaa la filayay inuu baxo Janaayo, laakiin dhaawac jilibka ah oo soo gaaray Andreas Christensen ayaa ka hor istaagi doona 23 jirkaan reer England inuu ka tago Stamford Bridge. (Cadceed)
Weeraryahanka Manchester United iyo England Marcus Rashford, 23, ayaa noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan suuqa kala iibsiga isagoo ku fadhiya 149 milyan waqt. (CIES Kormeerka Kubadda Cagta)
Wolves ayaa ka fiirsaneysa inay dib ugu yeerto weeraryahanka reer Talyaani Patrick Cutrone, oo 23 jir ah, oo ay amaah kaga soo qaadatay Fiorentina, si ay ugu bedesho Raul Jimenez oo dhaawacmay. (Boostada)
Tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone ayaa sheegay inuusan masuul ka noqon doonin xilli ciyaareedka soo socda, ka dib guuldaradii Copa del Rey ee shalay ka soo gaartay kooxda seddexaad ee Cornella. (Hadaf)
Maxaa xal u ah khilaafka?